Ixesha lokuhlola lilethe ukufumanisa kunye nentuthuko
Ixesha elibizwa ngokuba yi-Age of Exploration, ngamanye amaxesha kuthiwa yi-Age of Discover, yaqala ngokusemthethweni ekuqaleni kwekhulu le-15 kwaye yahlala ngekhulu le-17. Ixesha libhekiselwe njengexesha apho abantu baseYurophu baqala ukuhlola ihlabathi elwandle ngokufuna iindlela ezintsha zokurhweba, ubutyebi kunye nolwazi. Igalelo lexesha lokuPhanda liya kuguqula ngonaphakade ihlabathi kwaye liguqule i-geografi kwisayensi yanamhlanje namhlanje.
Ukuzalwa Kwexesha Lokuhlola
Iintlanga ezininzi zazikhangela iimpahla ezifana nesilivere negolide, kodwa esinye sezizathu eziphambili zokuhlola kwakunomnqweno wokufumana indlela entsha yezobucayi kunye ne-silk. Xa uMbuso wase - Ottoman uthatha ulawulo lweConstantinople ngo-1453, wawuvimbela ukufikelela kweYurophu kuloo ndawo, kunciphisa kakhulu urhwebo. Ukongezelela, kwavalela nokufikelela kwiNyakatho Afrika kunye noLwandle Olubomvu, iindlela ezimbini ezibalulekileyo kwezohwebo kwiMpuma Ekude.
Ukuqala kohambo oludibaniswe neNyaka yokuPhuhlulwa kwaqhutyelwa yiPutukezi. Nangona amaPutukezi, amaSpanish, amaTaliyane kunye nabanye bebehamba ngeMedithera kwizizukulwana, abaninzi abanomkhumbi bahlala bebona kakuhle umhlaba okanye bahamba ngeendlela ezaziwayo phakathi kwezichweba. INkosana uHenry Navigator yatshintshile loo nto, ikhuthaza abahlolisisi ukuba bahambe ngomkhumbi ngaphandle kweendlela ezikhethiweyo kunye nokufumana iindlela ezintsha zokurhweba eNtshona Afrika.
Abaphenyi basePortugal bafumanisa iIiraira zaseMiraira ngo-1419 kunye neeAzores ngo-1427.
Kule minyaka emashumi ezayo, babeza kufaka ngaphesheya kwe-Afrika kunye nolunxweme lwamaAfrika, bafike kunxweme lweSenegal namhlanje ngo-1440 kunye neCape of Good Hope ngo-1490. Ngaphantsi kweminyaka elishumi, ngo-1498, uVasco da Gama uza kulandela le indlela eya eNdiya.
Ukufunyanwa kwehlabathi elitsha
Ngoxa amaPutukezi avula iindlela ezintsha zolwandle kunye ne-Afrika, iSpeyin yaphupha nokufumana iindlela ezintsha zokurhweba kwiMpuma Ekude.
UChristopher Columbus , waseNtaliyane osebenzela ubukhosi baseSpain, wenza uhambo lwakhe lokuqala ngo-1492. Kodwa esikhundleni sokuba afinyelele eIndiya, uColumbus wafumana isiqithi saseSan Salvador kwinto eyaziwa namhlanje njengeBahamas. Waphinde wahlola isiqithi sase-Hispaniola, ikhaya leHaiti yanamhlanje kunye neRiphablikhi yaseRominican.
I-Columbus yayiza kubakho uhambo oluthathu oluya kwiiCaribbean, ukuhlola iindawo zaseCuba kunye nxweme laseMntla American. IziPhuthukezi zafika kwihlabathi elitsha xa umphenyi uPedro Alvares Cabral ahlola iBrazil, ecwangcisa ukungqubana phakathi kweSpeyin nePortugal ngokwemihlaba esandul 'ukufunyanwa. Ngenxa yoko, iSivumelwano seTordesillas sahlula ngokusemthethweni ihlabathi kwisiqingatha ngo-1494.
Uhambo lukaColumbus lwavulela umnyango wokunqoba iSpeyin yamaMerika. Ngeli khulu leminyaka elizayo, amadoda afana noHernan Cortes kunye noFrancisco Pizarro babeya kunqumla ama-Aztec aseMexico, ii-Incas zasePeru kunye nezinye izizwe zaseMelika. Ekupheleni kwexesha lokuPhonononga, iSpeyin yayiza kubusa ukusuka kumzantsi-ntshona eMelika ukuya kwiindawo ezikude zaseChile naseArgentina.
IGreat Britain neFransi baqala ukufuna iindlela ezintsha zokurhweba kunye namazwe kulo lonke ulwandle. Ngo-1497, uJohn Cabot, umhloli waseNtaliyane owayesebenza isiNgesi, wafikelela into ekukholelwa ukuba ngummandla waseNewfoundland.
Kuye kwalandelwa abaninzi abahlolisisi baseFransi nabaseNgesi, kuquka uGivanvan da Verrazano, owafumanisa ukungena kuMlambo wase-Hudson ngo-1524, kunye noHenry Hudson, owawucwangcisa isiqithi saseManhattan kuqala ngo-1609.
Kwiminyaka emashumi ezayo, amaFrentshi, amaDatshi namaBrithani ayeza kuphila ngokulawula. INgilani yamisa i-colony yokuqala yaseNyakatho Melika eMamestown, e-Va., Ngo-1607. USamuel du Champlain wasungula iQuebec City ngo-1608, kwaye i-Holland yasungula indawo yokuthengisa kwiNew York City namhlanje.
Olunye uhambo olubalulekileyo lokuhlola oluye lwaqhutywa ngexesha lokuPhononongo kwakunjalo uFerdinand Magellan uzama ukujikeleza ihlabathi, ukukhangela indlela yokurhweba eya e-Asiya ngeNtshonalanga yePedest Passage , kunye nohambo lukaCaptain James Cook olwamvumela ukuba ahlele imephu eyahlukeneyo kwaye ahambe njengoko kude neAlaska.
Ukuphela kwexesha lokuPhanda
Ixesha lokuPhonononga laphela ngasekuqaleni kwekhulu le-17 emva kokuqhubela phambili kwezobuchwepheshe kunye nolwazi olwandisiweyo lwehlabathi lwavumela amaYurophu ukuba ahambe ngokubanzi kwihlabathi lonke elwandle. Ukudalwa kweendawo zokuhlala kunye neenkoloni kwakha inethwekhi yonxibelelwano kunye nezorhwebo, ngoko kugqiba isidingo sokukhangela iindlela zorhwebo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uphando aluzange luyeke ngokupheleleyo ngeli xesha. Ummandla waseMpuma wase-Australia awufunanga ngokusemthethweni eBrithani nguCapt. UJames Cook wada wafika ngo-1770, ngelixa ininzi yeArctic neAntarctic yayingacingwe kuze kube se-19th century. Ininzi yeAfrika nayo yayingachangekanga ngama-Westerners ukuya ngasekuqaleni kwekhulu lama-20.
Ixesha lokuPhonononga lathintele kakhulu kwi-geography. Ngokuhamba kwimimandla eyahlukeneyo ehlabathini lonke, abaphandi babenokukwazi ukufunda ngokubanzi malunga nemimandla efana ne-Afrika kunye neMelika. Ekufundeni okungakumbi malunga nezo ndawo, abaphandi babenakho ukuzisa ulwazi lwehlabathi elikhulu kwiYurophu.
Izindlela zokuhamba kunye nemephu ziphuculwe ngenxa yokuhamba kwabantu abanjengoPrince Henry the Navigator. Ngaphambi kohambo lwakhe, abahamba ngeendlela basebenzisa iidrafti zendabuko zamandulo, ezisekelwe kumanxweme kunye namathangatye eefowuni, ukugcina abahamba ngeenxweme kufuphi nxweme.
Abaqhubi baseSpeyin nabasePutukezi abaye bahamba kwiindawo ezingaziwa badala iimephu zokuqala zeempawu zehlabathi, abaqhelanga nje kuphela i-geography yamazwe afunyenwe kodwa kunye neendlela zaselunxwemeni kunye nolwandle olwandle lwabahola apho.
Njengoko iteknoloji iphambili kunye nensimi yahlolwa, iimephu kunye nokupaka iimephu zanda ngakumbi kwaye zininzi
Ezi zihlolisiso zenze ihlabathi elitsha leentlobo zezilwanyana kunye nezilwanyana zaseYurophu. Ummbila, ngoku ube nesidlo esikhulu sezinto zokutya kwehlabathi, kwakungaziwa kumaWestern de kube ngexesha leNtshonalanga yaseSpain, njengamazambane kunye namaqhekeza. Ngokufanayo, abantu baseYurophu babengakaze babone ama-turkeys, i-llamas, okanye i-squirrels ngaphambi kokubeka unyawo eMerika.
Ixesha lokuPhonononga lisebenza njengelitye lokunyusa ulwazi. Kwavumela abantu abaninzi ukuba babone kwaye bafunde iindidi ezahlukahlukeneyo kwihlabathi eliye landa isifundo seendawo, sinika isiseko sokwazi oluninzi esinalo namhlanje.
IYeriko (iPalestine) - I-Archaeology yesiXeko sasendulo
I-Virgo Moon (iTransit) - I-Mood ne-Happenings
"Tommy Boy" Quotes zeMifanekiso
Indlela yokuchonga iNyaniso yaseFrank Lloyd Wright
Intliziyo - Idioms kunye neentetho
Iimbali zoBugcisa boBukumkani boBukumkani kwiIfayile
Yiyiphi iComputer iphendulela uMlilo oMlilo
Ubudala beMelika yaseMelika